Zvii Zvingaita Kuti Ndide Kuita Maekisesaizi? | Vari Kuyaruka
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lithuanian Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tsonga Turkish Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Bhaibheri rinoti: “ Kurovedza muviri kunobatsira. ” (1 Timoti 4:8) Vechiduku vakawanda vanoti “Ndinoda kuita maekisesaizi” asi zvinozongogumira pakutaura.
“Pandaiva kuchikoro hakusi kufoira ikoko kwaiita vana vakawanda zvidzidzo zvokuita maekisesaizi. Kuita maekisesaizi hakuna kumbooma.”—Richard, 21.
“Vamwe vanoti, ‘Handingasweri ndichimhanya zuva richindibanda. Zviri nani kutamba mavideo game ayo anoita sokuti uri kumhanyawo?’ ”—Ruth, 22.
Kana aya ari iwo mafungirowo ako, chimboona zvinhu zvitatu zvakanakira kuita maekisesaizi.
1. Kuekisesaiza kunoita kuti masoja omuviri wako agare akasimba. “ Baba vangu vaigara vachiti, ‘Kana ukasaita maekisesaizi, musi waucharwara uchaona kuti nguva yauchapedza wakarara waigona kunge dai uri kuita zvimwe zvinhu zvine musoro,’ ” anodaro musikana ane makore 19 anonzi Rachel.
2. Kuita maekisesaizi kunobudisa makemikari anoita kuti pfungwa dzako dzidekare. “ Kana ndiine zviri kundinetsa, kumhanya kunondibatsira kuti pfungwa dzigadzikane, ” anodaro musikana anonzi Emily, ane makore 16. “ Ndinonyatsonzwa nyama dzangu dzichipinda mhepo uye mupfungwa ndinonzwa kakudekara. ”
3. Kuita maekisesaizi kunoita kuti unakidzwe. Ruth anoti, “ Zvokufamba-famba ndinozvida chaizvo, saka pandinoita maekisesaizi ndinofamba, ndinoshambira, ndinomhanya muchando (snowboarding), uye ndinochovha bhasikiro. ”
Zvingakubatsira kuti ubudirire: Ita maekisesaizi anokunakidza kwemaminitsi 20 zvichikwira kwemazuva matatu pavhiki.
Yeuka izvi: Ichokwadi kuti zvauri zvinobvawo pakuti dzinza rokwenyu rakaita sei asi kazhinji mararamiro aunoita ndiwo anotema kuti uchava noutano hwakadini. Saka paunoti “Ndinoda kuita maekisesaizi,” zviri kwauri kubva wazviita kana kuti kurega!